सियालिस बनाम भियाग्रा: भिन्नता, समानताहरू र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार प्रेस औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण भारी खेल घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार मनोरञ्जन कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, समाचार औषधि बनाम मित्र कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> सियालिस बनाम भियाग्रा: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
यदि तपाइँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) को अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई मद्दत गर्न धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन्। ईडीको लागि उपचार विकल्पहरूमा मनोवैज्ञानिक, जीवनशैली, र औषधि उपचार । दुईमा प्राय जसो प्रायः निर्धारित औषधिहरू सियालिस (टडालाफिल) र भियग्रा (सिल्डेनाफिल) सामेल छन्।
सियालिस र भियाग्रा दुई ब्रान्ड नाम प्रिस्क्रिप्शन ड्रगहरू हुन् जसले ED लाई उपचार गर्न सक्दछन्। तिनीहरू औषधीहरूको वर्गमा समाहित छन् जसलाई फास्फोडीस्टेरेज-((PDE5) इनहिबिटर भनिन्छ र लिंगमा रगत प्रवाह बढाउँदै काम गर्दछ। यी औषधीहरूले एक मान्छेलाई निर्माण प्राप्त गर्न र कायम राख्न मद्दत गर्दछ। अन्य समान लागूपदार्थ समावेश छ Levitra (venderafil) र Sendra (avanafil)।
सियालिस र भियग्रा बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
Cialis (Cialis कूपन | Cialis के हो?) Tadalafil को लागि ब्रान्ड नाम औषधि हो। यो २००DA मा एफडीए-अनुमोदित भएको थियो र इरेक्टाइल डिसफंक्शन र सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (बीपीएच) को उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। Cialis यौन गतिविधि अघि वा आवश्यकता पहिले लिन सकिन्छ एक पटक दैनिक 36 hours घण्टा सम्म प्रभाव संग। Cialis यो लिने पछि minutes० मिनेट र hours घण्टा बीचमा शरीरमा अधिकतम स्तरमा पुग्छ। यो खानाको साथ वा खाली पेटमा लिन सकिन्छ।
भियाग्रा (भियाग्रा कूपन | भियाग्रा भनेको के हो?), जसलाई यसको जेनेरिक नाम सिल्डेनाफिल द्वारा पनि चिनिन्छ, एफडीएले १ 1998 1998 in मा अनुमोदन गरेको थियो र ईडीको उपचार गर्न फाइजरले बनाएको लोकप्रिय औषधि हो। ब्रान्ड नाम भियाग्रा केवल इरेक्टाइल डिसफंक्शनका लागि मात्र संकेत गरीन्छ। यौन गतिविधि अघि यो औषधीको अधिकतम स्तरको 30० मिनेट देखि २ घण्टा भित्र पुग्न पछि आवश्यक रूपमा लिईन्छ। भियाग्राको साथ उच्च-फ्याट खानाले औषधीको अवशोषणलाई कम गर्न सक्छ।
सियालिस र भियग्रा बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग Phosphodyterase प्रकार5(PDE5) अवरोधक Phosphodyterase प्रकार5(PDE5) अवरोधक
ब्रान्ड नाम के हो? ताडालाफिल
मानक खुराक के हो? इरेक्टाइल डिसफंक्शन: १० मिग्रि मौखिक ट्याब्लेट यौन गतिविधि अघि
ED को लागी एक पटक दैनिक प्रयोग: २. mg मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेट प्रति दिन मुख
ईपीको साथ बीपीएच वा बीपीएच: mg मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेट प्रत्येक दिन एकै समयमा स्तंभन रोग: यौन गतिविधि अघि ction० मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेट
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? चाहिए अनुसार चाहिए अनुसार
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? १ 18 बर्ष वा माथिका वयस्क पुरुषहरू १ 18 बर्ष वा माथिका वयस्क पुरुषहरू
कसरी बीमा बिना चिकित्सा बिल तिर्न
शर्तहरू Cialis बनाम Viagra द्वारा उपचार
सियालिस मुख्यतया ईडीको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि यसलाई बृष्ट प्रोस्टेटबाट संकेत र लक्षणहरूको उपचार गर्न पनि अनुमोदन गरिएको छ जसलाई बृइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (बीपीएच) पनि भनिन्छ। Cialis मा सक्रिय घटक Tadalafil Adcirca को रूप मा उपलब्ध छ, जो फुफ्फुसीय धमनी उच्च रक्तचाप (PAH), वा फोक्सोमा उच्च रक्तचापको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। Cialis पनि Raynaud घटना को लागी अफ-लेबल प्रयोग गर्न सकिन्छ, एक दुर्लभ रक्त वाहिका डिसअर्डर।
भियग्रा केवल ईडीको उपचारका लागि एफडीए-अनुमोदित छ। सिल्डेनाफिल साइट्रेट, भियाग्रामा सक्रिय घटक, पल्मोनरी धमनी उच्च रक्तचाप (पीएएच) को उपचारको लागि रेभेटियोको रूपमा पनि निर्मित छ। भियग्रा कहिलेकाँही लेना अफ-लेबल रनाउडको घटना र महिला यौन उत्तेजना विकारको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
दुबै सियालिस र भियग्रालाई पनि ईडी वरपरका बिभिन्न समस्याहरूको उपचार गर्न सिफारिस गरिएको छ। उदाहरण को लागी, भियाग्रा को अनुभव पुरुषहरु लाई मद्दत गर्न सक्छ प्रारम्भिक स्खलन त्यसोभए उनीहरूसँग राम्रो नियन्त्रण हुन सक्छ। Cialis देखीरहेको छ पुरुषहरु लाई लागी अन्य यौन रोगहरु का अनुभव को लागी ejaculatory र orgasmic प्रकार्यहरू ।
सर्त सियालिस भियाग्रा
इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) हो हो
सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (बीपीएच) हो हैन
रायनाडको घटना अफ-लेबल अफ-लेबल
महिला यौन उत्तेजना विकार हैन अफ-लेबल
के सियालिस वा भियग्रा बढी प्रभावकारी छ?
प्लेसबोको तुलनामा वा कुनै औषधि प्रयोग नगरी, सियालिस र भियग्रा दुबै इरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचारमा प्रभावकारी हुन्छन्। दुई औषधि बीच धेरै फरक जुन औषधी कति लामो हुन्छ, कसरी लिन्छ, र लिने व्यक्तिको मेडिकल इतिहाससँग सम्बन्धित छ।
यद्यपि ती दुबै प्रभावकारी छन्, सियालिस यसको एक पटक दैनिक खुराकको लागि रुचाइएको हुन सक्छ र यो बीपीएचको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। भियाग्रा यसको छोटो आधा जीवनको लागि रुचि हुन सक्छ जो केवल यसलाई थोरै आवश्यकताको रूपमा प्रयोग गर्दछ।
मा मेटा-विश्लेषण पोलि 16 १ 16 विभिन्न परीक्षणहरू र 5000००० भन्दा बढी बिरामीहरूको विश्लेषण, सियालिस र भियग्राले समान प्रभावकारिता र सुरक्षा देखायो। यी परिणामहरू ईरेक्टाइल समारोह (IIEF) -EF स्केलको अन्तर्राष्ट्रिय अनुक्रमणिकामा आधारित थियो जुन ईरेक्टाइल प्रकार्य निर्धारण गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। दुबै औषधीको साइड इफेक्टको समान घटनाहरू थिए। जबकि, सियालिस लिनेहरूले यौन आत्मविश्वासमा सुधार ल्याए र यसको लामो-अभिनय प्रभावहरूसँग योजना बनाउने सम्बन्धमा कम दबाब महसुस गरेको कारण यसलाई भियग्रा भन्दा बढी मनपर्‍यो।
अर्को परीक्षण देखायो कि सियालिस र भियाग्रामा सक्रिय तत्त्वहरू प्रभावकारितामा तुलनात्मक थिए। त्यहाँ दुई औषधि बीच कुनै महत्वपूर्ण फरक थियो। Cialis, तथापि, यसको लामो आधा जीवन संग अधिक लचकता प्रस्ताव गर्न सुझाव थियो।
यदि तपाईंसँग ED छ भने, कुन उपचार विकल्प तपाईंको लागि उत्तम हो भन्ने निर्धारण गर्न डाक्टरसँग परामर्श गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। एक औषधी तपाईको स्थितिमा निर्भर भई अर्कोमा बढी प्रभावकारी वा प्राथमिक हुन सक्छ।
कभरेज र सियालिस बनाम भियाग्राको लागत तुलना
ब्रान्ड नाम सियालिस सामान्यतया मेडिकेयर र प्राय: बीमा योजनाहरू द्वारा कभर हुँदैन। केहि योजनाहरु जेनेरिक टेडालाफिल कभर गर्न सक्छन्। जेनेरिक टेडालाफिलको औसत खुद्रा लागत 2.5 २55 thirty 2.5. mg मिलीग्राम ट्याब्लेटको लागि। एकलकेयर कूपनको साथ तपाई फार्मेसीमा निर्भर रहन छुट पाउन र $ -1 ०-१80० तिर भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ।
ब्रान्ड नाम भियाग्रा प्रायः मेडिकेयर र प्राय: बीमा योजनाहरू द्वारा कभर हुँदैन। तपाईको बीमा योजना जाँच गर्नुहोस् किनकि केहि योजनाहरूले जेनेरिक सिल्डेनाफिल समेट्न सक्दछ। जेनेरिक सिल्डेनाफिलको औसत खुद्रा लागत $ १$० वा लगभग $ 400। एकलकेयरले तपाईंलाई यस लागतलाई जेनेरिक सिल्डेनाफिलको लागि लगभग $ 75-140 मा कम गर्न मद्दत गर्दछ।
मानक खुराक २. mg मिलीग्राम ट्याब्लेट (of० को आपूर्ति) २ mg ​​मिलीग्राम ट्याब्लेट (of० को आपूर्ति)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे5२55 $ १-4०--4००
एकलकेयर लागत $ 90-180 -1 75-140
सियालिस र भियाग्राको साझा साइड इफेक्टहरू
सियालिस र भियाग्राले धेरै सामान्य साइड इफेक्टहरू साझा गर्दछ जस्तै कि टाउको दुख्ने, अपच, मांसपेशी दुख्ने, कम्मर दुखाइ, र नाकको भीड। दुबै ईडी औषधीहरूले केही हदसम्म फ्ल्शिंग पनि गर्न सक्दछन् जुन एक छाला टोनको साथ न्यानो भावना हो, विशेष गरी अनुहारमा। यी साइड इफेक्टहरू यी ड्रग्सका भासोडिलाटर प्रभावहरूको कारण हुन् जसले रगत वाहिनाहरूमा चिकना मांसपेशीहरूलाई आराम दिन्छ रगत प्रवाह बढाउन।
यी साइड इफेक्टको अतिरिक्त, सियालिसले अंगमा केही दुखाइ पनि दिन सक्छ। भियाग्राको अन्य साइड इफेक्टमा दृष्टि, मतली, चक्कर, र पुरानामा असामान्य परिवर्तनहरू समावेश छन्। सियालिस र भियाग्राको गम्भीर साइड इफेक्टले हृदय, वा मुटु, हृदयघात, स्ट्रोक, सेरेब्रोवास्कुलर हेमोरेज, धडकन, र एरिथमियास जटिलताहरू समावेश गर्दछ विशेष गरी यदि केहि अन्य ड्रग्ससँग लिईएको छ भने (ड्रग अन्तर्क्रियाहरू हेर्नुहोस्)।
* १० मिलीग्राम ट्याब्लेट भियाग्रा
* Mg० मिलीग्राम ट्याब्लेट
टाउको दुखाई हो एघार% हो एक्काइस%
मांसपेशी दुख्ने हो %% हो दुई%
ढाड दुख्नु हो %% हो %%
नाकको भीड हो %% हो %%
फ्ल्याशिंग हो %% हो १%%
पाखुरा वा खुट्टामा दुखाइ हो %% हैन -
असामान्य दृष्टि हो <0.1% हो दुई%
चक्कर हो <2% हो %%
मुहान: डेलीमेड (सियालिस) , डेलीमेड (भियाग्रा)
सियालिस बनाम भियाग्राको ड्रग अन्तर्क्रिया
सियालिस र भियग्रा जस्ता PDE5 अवरोधकर्ताहरूले समान औषधी अन्तर्क्रिया गर्दछन्। सियालिस र भियाग्रा कुनै पनि औषधीको साथ प्रयोग गर्नु हुँदैन जसले रक्तचाप घटाउन सक्छ। यी औषधीहरूले नाइट्रेटहरू, अल्फा ब्लकरहरू, एन्टिहाइपरटेन्सेभ्स (रक्तचाप घटाउने ड्रग्स), र रियोसियगुएट समावेश गर्दछ। यी औषधिहरू सँगै लिएर खतरनाक कम रक्तचाप निम्त्याउन सक्छ।
सियालिस र भियग्रा दुबै कलेजोमा प्रशोधन गरिन्छ। तसर्थ, ती औषधिहरूको साथ प्रयोग गरिनु हुँदैन जसले केही इन्जाइमहरूको प्रकार्य परिवर्तन गर्दछ। CYP3A4 अवरोधकर्ताहरू, जस्तै केहि एन्टिबायोटिक, एन्टिफंगलहरू, र एचआईभी प्रोटीज इनहिबिटर ड्रग्स, शरीरमा सियालिस र भियग्राको स्तर बढाउन सक्छ। CYP3A4 inducers, के रूप में फेनिटोइन वा carbamazepine जस्तै एन्टिकोनवल्सेन्ट्स को साथै रिफाम्पिन भनिन्छ एक एन्टिबायोटिक Cialis र भियग्रा को प्रभावकारिता कम गर्न सक्नुहुन्छ।
सियालिस र भियाग्रा पनि रक्सी र अंगूरको रसबाट टाढा रहनु पर्छ। मदिरा वा अंगूरको रस पिउँदा ईडी औषधिहरूको साइड इफेक्ट बढ्न सक्छ।
औषधि ड्रग क्लास सियालिस भियाग्रा
बुटाइल नाइट्रेट नाइट्रेट हो हो
रियोकिगुट गुयनालेट साइक्लस उत्तेजक हो हो
अल्फुजोसिन अल्फा अवरोधक हो हो
Valsartan एन्टिहाइपरपोर्टिभ हो हो
सकिनविर प्रोटीज अवरोधक हो हो
कार्बामाजेपाइन एन्टिकोनभल्सेन्ट हो हो
एक सोमा गोली कस्तो देखिन्छ?
Cialis र भियग्रा को चेतावनी
सियालिस र भियाग्रा जस्ता ईडी औषधीहरूले मुटुको जटिलताहरू जस्तै मुटुको आक्रमण, स्ट्रोक, र एरिथमियास हुन सक्छ, विशेष गरी हृदयको स्वास्थ्य अवस्थाको साथ। सियालिस र भियाग्राले रक्तचापमा परिवर्तन गर्न सक्दछ जब अन्य रक्तचाप औषधिहरूको साथ प्रयोग गरिन्छ।
D घण्टा भन्दा लामो लामो लामो इरेक्शन ईडी औषधिहरूमार्फत सम्भव छ। इरेक्शनहरू जो दर्दनाक हुन्छन् र hours घण्टा भन्दा लामो हुन्छन् प्रियापिजम भनिन्छ। यदि तपाईं यी प्रतिकूल प्रभावहरू अनुभव गर्नुहुन्छ भने, तुरून्त मेडिकल ध्यान खोज्नुहोस्।
जेहुकै दुर्लभ भए पनि, सियालिस र भियग्राले दृष्टि वा सुनुवाईमा असामान्य परिवर्तन गर्न सक्दछ। अधिक गम्भीर मामिलाहरूमा, यी औषधीहरूले अचानक सुन्ने वा दृष्टि गुमाउन सक्छ।
सियालिस र भियाग्रा १ women बर्ष भन्दा कम उमेरका महिला वा बच्चाहरूको लागि एफडीए स्वीकृत छैनन्।
कसरी कोभिड एन्टिबडी परीक्षण परिणाम पढ्न
सियालिस र भियागरा यौनजन्य रोगहरू (एसटीडीहरू) बाट रक्षा गर्दैन। एसटीडीहरू रोक्नको लागि अन्य सुरक्षात्मक उपायहरू विचार गर्नुहोस्।
गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नक्कली ईडी औषधिहरूमा अधिक सामान्य हुन सक्छ। नक्कली भियाग्रा सक्रिय घटकको अन्य सामग्रीहरू वा गलत मात्रा समावेश गर्न सक्दछ। नक्कली औषधिहरू एफडीएद्वारा अनुमोदित छैन। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं एक विश्वसनीय स्रोतबाट सुरक्षित र प्रभावकारी औषधि पाउँदै हुनुहुन्छ।
सियालिस बनाम भियाग्रा बारे प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
सियालिस भनेको के हो?
Cialis, यसको सामान्य नाम tadalafil द्वारा पनि चिनिन्छ, ईरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) को लागी प्रयोग गरीने औषधि हो। यसले ठूलो प्रोस्टेट, वा सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (बीपीएच) को साथ पुरुषहरूलाई पनि उपचार गर्न सक्दछ। Cialis आवश्यक रूपमा वा once 36 घण्टा सम्म प्रभावको साथ दैनिक एक पटक लिन सकिन्छ।
भियाग्रा पनि यसको सामान्य नाम सिल्डेनाफिल द्वारा चिनिन्छ। यो ईरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) को लागी तोकिन्छ। भियाग्रा सामान्यतया एक mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटको रूपमा लिईन्छ यौन गतिविधि अघि minutes० मिनेट देखि hours घण्टा सम्म। यसलाई उच्च फ्याट खानाले टाढा राख्नु पर्छ जसले यसको अवशोषणलाई कम गर्न सक्दछ।
के सियालिस र भियग्रा एकै हुन्?
सियालिस र भियाग्रा फोस्फोडीस्टेरेज ((PDE5) अवरोधक भनिने औषधिहरूको समान वर्गमा छन्। जे होस्, ती उस्तै छैनन्। सियालिसले टाडालाफिल समावेश गर्दछ र भियग्रामा सिल्डिनेफिल हुन्छ। तिनीहरूसँग केहि फरक साइड इफेक्ट र प्रयोगहरू छन्।
के सियालिस वा भियग्रा राम्रो छ?
सियालिस र भियग्रा दुबै ईडीका लागि प्रभावकारी छन्। Cialis यसको एक पटक-दैनिक खुराक र दीर्घ-स्थायी प्रभावहरूको लागि प्राथमिकता हुन सक्छ। यदि तपाइँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन अनुभव गर्नुहुन्छ र उपचारको खोजीमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ धेरै छन् डाक्टरहरू र विशेषज्ञहरू जसले तपाईंको ED आकलन गर्न सक्दछन् र तपाईंलाई आफ्नो यौन जीवनको लागि उत्तम विकल्प फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
के म गर्भवती हुँदा सियालिस वा भियग्रा प्रयोग गर्न सक्छु?
होईन। सियालिस र भियागरा गर्भवती महिलाहरूको लागि संकेत गरीएको छैन। जबकि केहि अफ-लेबल प्रयोग महिला यौन उत्तेजना विकारका लागि रिपोर्ट गरिएको छ, जो गर्भवती महिलाले ED औषधि लिनुहुन्न।
के म सियालिस वा भियग्रा रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
रक्सीको साथ Cialis वा Viagra प्रयोग गर्न सिफारिस गरिदैन। रक्सीले चक्कर र टाउको दुखाइ जस्ता साइड इफेक्ट बढाउन सक्छ। यी औषधिहरूसहित रक्सी पिउँदा कम रक्तचाप हुन सक्छ।
सियालिसलाई शिखरमा पुग्न कति समय लाग्छ?
यस अनुसार एफडीए लेबल , शरीरमा Cialis को अधिकतम स्तर एक खुराक लिए पछि minutes० मिनेट र hours घण्टा भित्र पुग्न सकिन्छ। Cialis खाना बिना वा खाना बिना यसको शोषणलाई असर गर्दैन।
Cialis ले तपाईंलाई लामो समय सम्म बनाउँछ?
सियालिसले लामो समयसम्म तपाईंको क्षमतामा असर गर्दैन। यो यौन गतिविधि को लागी एक निर्माण प्राप्त गर्न र मद्दतको लागि प्रयोग गरिन्छ। Cialis संग निर्माणको लागि यौन उत्तेजना वा उत्तेजनाको आवश्यक छ।
के भियाग्रा र सियालिस सँगै लिन सकिन्छ?
भियाग्रा र सियालिस सँगै लिनु हुँदैन। किनभने तिनीहरू समान तरिकाले कार्य गर्दछन्, तिनीहरूलाई सँगै लैजाँदा प्रतिकूल साइड इफेक्टको जोखिम बढ्न सक्छ।
कसरी चाँडै एक uti बाट छुटकारा पाउन
डिग्री फरेनहाइट मा सामान्य शरीर को तापमान के हो?
कहिले सम्म तपाइँ एन्टिबायोटिक सुरु गरे पछि निमोनिया संग संक्रामक हुनुहुन्छ
claritindको लागी कहिले सम्म काम गर्न को लागी
के दुखाई को लागी विकोडिन भन्दा बलियो छ